China mpamokatra vokatra plastika mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Ny famolavolana vokatra plastika dia ny mamaritra ny endrika sy ny rafitra, ny refy ary ny fahamendrehana, ny kalitaon'ny endriny. Miorina amin'ny fepetra takiana amin'ny vokatra sy ny toetran'ny fitaovana ampiasaina izy io. Ny kalitaon'ny famolavolana vokatra plastika dia mamaritra mivantana ny mety sy ny vidin'ny famokarana.
Ny famolavolana vokatra plastika dia misy lafiny maro. Amin'ny fampiharana, endrika sy endrika firafitra isan-karazany no hitranga. Ny fahalalana tafiditra amin'izany dia misy: fifantenana materialy, fifandraisana misy eo amin'ny firafitry ny bobongolo sy ny vokatra, ny lesoka amin'ny endrika miseho vokatry ny famolahana ny tsindrona, ny fandrindrana eo amin'ny akorandriaka, ny fifandraisana misy eo amin'ny akorandriaka sy ny firafitra natao ho an'ny asa iray, sns.
Orinasa Mestech dia manome ny mpanjifa plastika plastika sy famolavolana tsindrona ho an'ny vokatra nomerika elektronika, mpandahateny herinaratra, trano maivana, jiro jiro, lakozia sy kojakojam-panaka, fikarakarana ara-pahasalamana, solosaina, vokatra peripheral fiara. Ireo faritra ireo dia manana endrika sy habe isan-karazany, ao anatin'izany:
(1) 、 Fonenana plastika
(2) 、 Taribary plastika
(3) 、 Ampahany mangarahara
(4) 、 ampahany roa amin'ny famolavolana fitaovana
(5) 、 Piy plastika tsy tantera-drano
(6) 、 Gear, fitaovana kankana
(7) 、 kofehy kofehy sy kofehy
(8) 、 Sombin'ny rindrina manify
(9) 、 Mametraha faritra labiera
(10) 、 Fizarana elastomer
Sombiny tsindrona indroa
Taorian'ny nahavitan'ny sary ny endrika plastika tamin'ny ankapobeny dia ilaina ny famakafakana ny fantsom-bokatra ary ny fanamarinana ny tabilao tanana amin'ny ankapobeny. Manova sy manatsara hatrany ny famolavolana, ary apetraka amin'ny famokarana bobongolo sy ny famokarana faritra.
Mestech dia manome ny mpanjifa plastika plastika famolavolana, famolavolana bobongolo ary famokarana bobongolo tsindrona. Raha mila mahafantatra bebe kokoa ianao dia mifandraisa aminay ary hanome anao ny serivisy tsara indrindra izahay.
Previous: Famolavolana ny fitaovana ao an-trano
Manaraka: Famolavolana ampahany vy
Fanamboarana tsindrona jiro fanamoriana fiara
Singa plastika amin'ny varavaran'ny fiara
Fanodinana lahatsoratra amin'ny faritra plastika